Zviga zvebvumirano - PDF.to
Pasi pane shanduro ine utsinye yemashandisirwo edu emutauro weChirungu uye shanduro yemubhadharo yemitemo yemitemo inoshandiswa chete muChirungu
Kuvanzika kwako kwakakosha kwatiri. Iri mutemo wePdf.to kuremekedza zvakavanzika zvako nezve chero ruzivo rwatinogona kutora kubva kwauri kuenda pawebhusaiti yedu, https://pdf.to , nedzimwe nzvimbo dzatinadzo uye dzatinoshanda.
Isu tinongokumbira ruzivo rwevanhu chete kana isu tichinyatsoida kuti ipe basa kwauri. Isu tinozviunganidza nenzira dzakaringana uye dziri pamutemo, neruzivo rwako uye nemvumo. Isu tinokuzivisaiwo kuti nei tiri kuzviunganidza uye nemashandisi azvichashandiswa.
Isu tinongochengetedza ruzivo rwakaunganidzwa kwenguva yakareba sezvazvinodiwa kuti tikupe iwe nebasa rako rakakumbirwa. Chii chatino chengeta, chatino chengetedza mukati medzidziso ino gamuchirwa nzira yekudzivirira kurasikirwa uye kuba, pamwe nekusawanikwa kuwana, kuzivisa, kutevedzera, kushandisa kana kugadzirisa.
Isu hatigovanisi chero ruzivo rwevanhu pachena kana nevatatu mapato, kunze kwekunge zvichidikanwa nemutemo.
Webhusaiti yedu inogona kubatanidza kune ekunze masosi asina kushanda nesu. Ndokumbira uzive kuti hatina masimba pamusoro pezvirimo nemaitiro enzvimbo idzi, uye hatigone kugamuchira mutoro kana dhadha yehurongwa hwavo hwekuvanzika.
Iwe wakasununguka kuramba chikumbiro chedu cheruzivo, neruzivo rwekuti isu tinogona kunge tisingakwanise kukupa iwe kune mamwe emabasa ako aunoda.
Kuenderera mberi kwako kushandisa webhusaiti yedu kunoonekwa sekugamuchira kwemaitiro edu akapotera zvakavanzika uye ruzivo rwevanhu. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve maitiro atinoita vashandisi data uye ruzivo rwevanhu, inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Iyi pfungwa inoshanda kubva musi wa 6 Gunyana 2019.
Mafaira akaiswa anodzimwa mushure memaawa maviri uye mafaera akashandurwa anodzimwa mushure memaawa makumi maviri nemana. Kuti udzikise kushungurudzwa, isu tinonyora kero yeIP iyo yakaita shanduko kana faira yatendeuka, hapana mubatanidzwa kumafaira uye IP kero. Mushure meawa imwe kero iyo IP kero yakabviswa saka zvakasununguka kuita imwe kutendeuka.
Shandura kubva paPFP
PDF kuenda kuExcel
PDF kune Image
PDF kune Chinyorwa
PDF kune HTML
PDF ku CSV
PDF kune XLSX
PDF kune OCR
PDF kune Email
Excel ku PDF
XLS kune PDF
JPG ku PDF
PNG ku PDF
PowerPoint kune PDF
PPT kuti ipe PDF
HTML kune PDF
ODT ku PDF
CSV kuPod PDF
Mufananidzo kune PDF
Delete mapeji ePDF
195,645 kutendeuka kubva muna 2019!
Yakavanzika Policy - Zviga zvebvumirano - Taura nesu - API
Yakagadzirwa na nadermx - © 2020 Pdf.to
Wapfuura yako yekushandura muganho weimwe paawa, unogona kushandura mafaera ako mukati 59:00 kana Sign up uye shandura ikozvino.
Kuve PRO kunokupa aya maficha
☝ Kutendeuka kusingadzivisiki
🥇 OCR Kutendeuka
🐱 Kunyanya kukoshesa
🚀 Feature Chikumbiro Sarudzo
Kubhadharwa kamwe chete
Kuvandudzwa kunze kwekunge kwadzimwa